सुतिरहेकि छोरीको कोठाबाट यस्तो आवाज आएपछि… – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > सुतिरहेकि छोरीको कोठाबाट यस्तो आवाज आएपछि…
सुतिरहेकि छोरीको कोठाबाट यस्तो आवाज आएपछि…
admin November 6, 2020 November 6, 2020 Uncategorized	0
डोटी – समाजको शान्ति सुरक्षामा ख’टिनुपर्ने निकायका व्यक्तिबाटै जघन्य अ पराध ! सामान्यतः कल्पना बाहिरका यस्ता घटना बेलाबखतमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् तर यस्ता कु’कर्ममा स’म्लग्नलाई कानूनी क’ठघरामा उभ्याउने काम पनि तिनै सुरक्षा निकायबाट हुँदै आएको छ । डोटीका एक सुरक्षाकर्मी नै त्यस्ता घटनामा मु’छिएका छन्, जसले सभ्य समाजका साथै नेपाल प्रहरीको पनि मर्यादामा प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।
डोटीको जोरायल गाउँपालिका–५ गडसेरास्थित अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत २४ वर्षीय प्रहरी जवान सुशील सिंह बालिका क’रणीमा मुछिएका छन् । उनीविरुद्ध कि’टानी ‘जाहेरी परेपछि उनीविरुद्ध कानूनबमोजिम मुद्धा चल्ने भएको छ । प्रहरी जवान सिंहले जोरायल गाउँपालिका–५ गडसेरा १५ वर्षीया बा लिकालाई क’रणी गरेको आ रोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीका अनुसार बालिकालाई विवाह गर्ने प्रलोभन देखाइ क’रणी गरेको भन्ने पी’डितको उजुरीका आधारमा प्रहरी जवानविरुद्ध मु’द्धा दर्ता भएको हो । प्रहरी जवान सिंहले यही कातिक १३ गते राति बालिकालाई उनी सुतेकै कोठामा गएर क’रणी पछि झु’ ण्ड्या’एर ज्या’न लिने प्र’यास गरेको पी डित बालिकाका आफन्तले आ’रोप लगाएका छन् । ज्या’न लि’ने प्र’यासबारे त्यस रात पी’डितका पिताले थाहा नपाएका भए ती बालिकाको अ’कालमा ज्या’न जान सक्ने ख’तरा थियो ।
पी’डित बालिकाका पिताले भन्नुभयो, “सुनसान रात थियो, कोही चि ‘च्चाएको जस्तो आवाज आयो, को रहेछ भनेर हेर्न जाँदा आफ्नै छोरीलाई उनको रु खमा झु’ ‘ण्डाएको अवस्थामा भेटेँ । ह’तारह’तार गएर दो’पट्टा का ‘टेर बचायौँ ।”पी’डित परिवार अ’चेत अवस्थामा भेटिएकी छोरीलाई बोकेर उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी पुगेको थियो ।
उपचारपश्चात् बा’लिकाको हो स आएपछि आज बल्ल कर’णी को मुद्धा दर्ता गर्न आएको पी’डित परिवारले जनाएको छ । “नागरिकको सुरक्षाका लागि ख’टिएका प्र हरीबाट यस्तो हुन्छ भने अरुबाट के आश गर्नु ?, ती पिताले भन्नुभयो, “हामीले छिटो न्याय पाउनुपर्छ । दोषीलाई क ‘डा कारबाही हुनुपर्छ ।”
बा’लिकाको घाँ टीमा दो’ पट्टा’ले ल गाएको फाँ’ सीको ‘घा’उ अहिलेसम्म स्पष्टै देख्न सकिन्छ । घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न एक प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा प्रहरी टोली ख’टाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीका प्रहरी प्रमुख जनकराज पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालिकाको घा ‘टीमा घा’उ देखिन्छ, प्रहरी ज’वानविरुद्ध क’रणी को मुद्धा दर्ता गरी छानबिनका लागि टोली खटाएको छु, अब मुद्धा चल्छ ।”
निज प्रहरी जवानले बालिकालाई कु’ टपि ट गरेका का’रण उनको खुट्टामा पनि नि ‘लडा म देखिन्छ । आफूलाई प्रहरी जवान सिंहले विवाह गर्ने भन्दै सँधै फोन गर्ने गरेको ‘पी’डित बालिकाले आ’रोप लगाएकी छिन् । चालु आर्थिक वर्षको यही कात्तिक १७ गतेसम्म जिल्लामा कूल छ वटा र गत आर्थिक वर्षमा सात वटा क’रणी का घटनामा अनुसन्धान भई मुद्धा चलाइएको प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
ती सबै घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा पेश गरी पूर्पक्षका लागि पीडकहरु कारागार चलान भएका छन् । विगतमा गाउँगाउँमा प्रहरी चौकी नहुने भएकाले उजुरी नआउने तथा घटना सार्वजनिक नहुने भएकाले पछिल्लो समयमा कर’णी का ‘टनामा वृद्धि हुँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ । जघन्य अ’परा’धबाहेकका सा’माजिक झैँ झ गडा र वि वादमा विषय स्थानीय तहका स्थानीय न्यायिक समितिका इजलाशमा बहश भई निर्णय हुने गरेका छन् । सक्रियता र प्रभावकारिताका दृष्टिमा जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकाको स्थानीय न्यायिक समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमूना न्यायिक समिति मानिन्छ ।
यो पनि : नयाँ धान खरिद शुरु
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले कैलालीमा नयाँ धान खरिद कार्य आजबाट शुरु गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको स्थानीय प्राथमिक खरिद समितिको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम किसानको धान खरिद कार्य शुरु गरिएको कार्यालयका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाको मोहनपुर र टीकापुरमा रहेको कम्पनीको आफ्नै गोदाममा काँटा सञ्चालन गरी आजैबाट नयाँ धान खरिद शुरु गरिएकामा सत्ती, भजनी र जोशीपुरमा एक÷दुई दिनमा खरिद कार्य शुरु हुन लागेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा कम्पनीले नयाँ धान खरिद गर्न लागेको हो । सरकारले मोटो धान प्रति क्वीन्टल रु दुई हजार ७३५ समर्थन मूल्य तोकेको छ । कम्पनीले यस वर्ष छ हजार ५०० मे.टन (६५हजार क्वीन्टल) धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष ५०हजार क्वीन्टल धान खरिद गरिएको थियो ।
कम्पनीले धान खरिदको व्यवस्था समयमै नगर्दा आजसम्म स्थानीय साना किसानलाई घर खर्चको व्यवस्था गर्नका लागि प्रति क्वीन्टल रु दुई हजारमा व्यापारीलाई बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको थियो । सरकारी कार्यालयले समयमै धान खरिदको व्यवस्था नगर्दा आफूले दशैँमा घर खर्च जुटाउनका लागि व्यापारीले भनेको भाउमा धान बेच्न बाध्ष् भएको धनगढीका किसान रामदीन चौधरीले गुनासो गर्नुभयो ।
अनुकूल मौसमका कारण यस वर्ष जिल्लामा धान उत्पादन गत वर्ष भन्दा वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले डुबानबाट प्रभावित क्षेत्रबाहेक जिल्ला भरीको उत्पादन यस वर्ष गत वर्षभन्दा केही वृद्धि भएको अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
डुबानको समस्याका कारण भजनी र जानकीनगरलगायतका क्षेत्रमा गरिएको जग्गाको धानवाली नष्ट भएको थियो । जिल्लामा झण्डै ७० हजार हेक्टर जग्गामा वर्षे धान खेती हुँदै आएकामा उत्पादकत्व प्रति हेक्टर तीन दशमलव पाँच मे.टन रहेको छ ।
हेर्नुस् त यी जोडीले सार्वजनिक पार्कमा आफूहरूलाई रोक्न नसकेपछि…
०७७ कार्तिक २२ गते, इ.स. २०२० नोभेम्बर ०७ तारिख शनिबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!
कास्कीमा भेटिएकाे पजेटिभ सँक्रमितका बारे यस्तो रहेछ, नयाँ होइन
कमेडी च्याम्पियनका टप ३ फाइनलिष्ट हिमेश पन्तलाई कसले दियो ज्या’न मा’र्ने ध’म्की? यसरी खोले सबै कुरा (भिडियो सहित)
बसमा चढेकि यी युवतीको बयान : एकै दिन ३० जनासंग…
एउटा यस्तो भेट, जस्ले सारा नेपालीहरूलाई भावुक बनायो!
आज यि ५ प्रदेशमा स तर्क रहन महाशाखाको चे तावनी, के के छन् जोखिम ?
एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री बस्नेतले यसरी फाले टेबल (भिडियो सहित)
०७८ असार २७ गते देखि श्रावण २ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहाेस्